Wadada ugu halista badan Muqdisho lagu bilaabay nalalka cadceeda ku shaqeeya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Maamulka gobolka Banaadir ayaa maanta Wadada Warshadaha ee Muqdisho ku bilaabay nalalka ku shaqeeya cadceedda, kadib markii horay loo saaray jidadka Maka Almukarramada, Wadanaha, Sodonka iyo kuwa kale.
Jidka Warshadaha ayaa loo arkaa inuu yahy wadada ugu halista badan Muqdisho, islamarkaana u dhwo halka looga baxo magaalada, iyadoo habeenkii xaalkeeda aan war badan la ogaan karin.
Nalalkaan ku dhaqeeya cadceedda ayaa horay qaraxyo loola beegsaday, waxaana dhulka la dhigay qaar badan oo ka mid ah, kuwaasoo intoo badan ku yaalay Jidadka Sodonka iyo Wadnaha, inkastoo ay jiraan kuwa aan badneyn oo laga qarixiyey Wadada Maka Alumarrama.
Sakari Ismaaciil oo bixiyay xog lagu soo qaba karo Samantha Lewthwaite